आन्दोलनरत डा. केसी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी :: a1nepal.com.np
आन्दोलनरत डा. केसी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौँ, २५ फेव्रुवरी । लामो समयदेखि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुदै आइरहेका व्यापक अनियमितता मेडिकल माफियाका विरुद्द आन्दोलनरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक सामाजिक अभियान्तता डा. गोविन्द केसि विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघका केन्द्रिय श्रम तथा रोजगार विभागका सचिव विपीन ढकालले आइतबार डा. के सीविरुद अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
दर्ता नम्वर १२३९६ रहेको उक्त उजुरीमा ढकालले डा. केसीले सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको बेला सेवाबाट विमुख भएको एवं अस्पतालमा उपलब्ध हुने सेवालाई प्रभावित पार्ने गरि आन्दोलन गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
साथै उजुरीमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने क्रियाकलाप गरेकाले छानबिनको माग पनि गरिएको उजुरीमा गरिएको छ ।
उजुरीको पूर्ण अंश :
← करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा	गीत-तिमी हिड्ने बाटो बेग्लै,मैले हिड्ने बाटो बेग्लै →